IZITAYILE EZI-31 EZITSHA ZENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-31 yeeNwele ezitsha zaMadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-31 yeeNwele ezitsha zaMadoda
Isikhokelo sethu sezona ndlela zilungileyo zokuhombisa iinwele zamadoda ngo-2021, sajonga kwezona zinwele ziphambili zamadoda zezabo beenwele ezinezakhono kwihlabathi liphela. Nangona kuninzi…
Isikhokelo sethu sezona ndlela zilungileyo zokuhombisa iinwele zamadoda ngo-2021, sajonga kwezona zinwele ziphambili zamadoda zezabo beenwele ezinezakhono kwihlabathi liphela. Nangona uninzi lweenwele ezithandwayo zeminyaka edlulileyo ziya kuqhubeka nokuhamba phambili, indawo yokucheba iinwele ihlala ivelisa iindlela ezintsha zokucheba iinwele. Nangona kunjalo, abafana kufuneka balindele undercuts kunye nesikhumba esiphakamileyo nesisezantsi ukuphela kweenwele ngeenwele ezenziwe ngombala ngaphezulu ukuba ziqhubeke njengeenwele zamadoda eziqhubekayo.
Nangona kuninzi ukusika okupholileyo kunye nezitayile, umzekelo wesitayile esitsha sokucheba ukuzama kulo nyaka uza kuba unqanyulwe ngaphantsi ngenxalenye enzima yekama ngaphezulu okanye mhlawumbi ephezulu impandla iyaphela sika kunye iinwele ezixineneyo . Zombini iinwele zishiya iinwele ezaneleyo phezulu kubafana ukuba banxibe ezinye iindlela ezipholileyo, ezinje nge ifeksi , pompadour, quiff, fringe, brusher back okanye spiky.
1Ukucheba kweenwele kwamadoda okutsha
1.1Ulusu olusezantsi luphela kunye nomphetho wokukrola
1.2Ukuphela okuphezulu kunye nePompadour kunye neendevu
1.3I-Mid Drop Fade kunye neQuiff
1.4Ngaphantsi kweComb Over Pomp
1.5Ukuphela kweBald ephantsi ngeLayini ephezulu kunye neBuzz Sika
1.6Ikama ngaphaya kunye Part kunye Fade High
1.7I-Mid Fade kunye neHard Part kunye nePompadour
1.8Ukucheba okuphezulu kweBald kunye neenwele zeSpiky kunye noYilo
1.9Kudala utyibilikise umva ngeNtshebe
1.11Ulusu oluPhakamileyo oluPhezulu luphela nge-Curly Afro
1.12Ukuphela kwesantya esiphantsi kunye neQuiff
1.13Amacandelo amafutshane anamaLungu aPhezulu aPhezulu kunye neendevu
1.14I-Undercut Fade kunye neFaux Hawk kunye neendevu
1.15Ukuphela okuphezulu kunye nokuPhezulu okuPhuliweyo
1.17I-Taper Fade kunye neCandelo eliQinisekileyo leComp Over and Beard
1.18Indoda Bun kunye neendevu
1.19Ulusu olusezantsi luphela ngee-curls kunye ne-V-Shaped Neckline
1.20Razor ephezulu iphela ngeenwele zeSpiky kunye neendevu
1.21I-Undercut Fade eneNxalenye enzima kunye neendevu
1.22I-Undercut Back Undercut kunye neendevu
1.23Ukufiphala kweBald esezantsi kunye nokudibanisa okude ngaphezulu
1.24I-Mid Fade kunye ne-Brush Back Hair
1.25Ukudakumba okuphezulu ngeCurly Fringe
1.26Ukucinywa koQeqesho oluQhawulweyo ngoBumbeko oluCwangcisiweyo
1.27I-Mid Bald Fade kunye nePompadour kunye neendevu
1.28Ulusu oluPhezulu oluPhukileyo luphela ngeCurly Mohawk
1.29I-Taper ephantsi ene-Angular Crop kunye neendevu
1.30Amacandelo amafutshane aneCandelo elisecaleni kunye neStubble
Ukucheba kweenwele kwamadoda okutsha
Ukukhuthaza ngezimvo, nazi iinwele ezintsha zamakhwenkwe zokuzama kulo nyaka. Siqinisekisile ukufaka inani elide, eliphakathi, kunye iinwele ezimfutshane yamadoda anokufuna ukuzama ngeendlela ezimfutshane kakhulu ukuya kwezide. Sineentlobo ezahlukeneyo zokucheba kweenwele zabafana abaneenwele ezishinyeneyo, ezibhityileyo, ezigobileyo, nezineenwele ezithe nkqo. Ke nokuba ufuna ukusikwa kweklasikhi okanye isitayile sangoku, ezi zezona zinwele zishushu ezihamba phambili ukufumana lo nyaka!
Ulusu olusezantsi luphela kunye nomphetho wokukrola
Ukuphela okuphezulu kunye nePompadour kunye neendevu
I-Mid Drop Fade kunye neQuiff
Ngaphantsi kweComb Over Pomp
Zodiac ilanga inyanga ephumayo
Ukuphela kweBald ephantsi ngeLayini ephezulu kunye neBuzz Sika
Ikama ngaphaya kunye Part kunye Fade High
I-Mid Fade kunye neHard Part kunye nePompadour
Ukucheba okuphezulu kweBald kunye neenwele zeSpiky kunye noYilo
Kudala utyibilikise umva ngeNtshebe
Ulusu oluPhakamileyo oluPhezulu luphela nge-Curly Afro
Ukuphela kwesantya esiphantsi kunye neQuiff
Amacandelo amafutshane anamaLungu aPhezulu aPhezulu kunye neendevu
I-Undercut Fade kunye neFaux Hawk kunye neendevu
Ukuphela okuphezulu kunye nokuPhezulu okuPhuliweyo
I-Taper Fade kunye neCandelo eliQinisekileyo leComp Over and Beard
yintoni uphawu lwakho olukhulayo
Ulusu olusezantsi luphela ngee-curls kunye ne-V-Shaped Neckline
Razor ephezulu iphela ngeenwele zeSpiky kunye neendevu
I-Undercut Fade eneNxalenye enzima kunye neendevu
Ukufiphala kweBald esezantsi kunye nokudibanisa okude ngaphezulu
I-Mid Fade kunye ne-Brush Back Hair
Ukudakumba okuphezulu ngeCurly Fringe
ubumnyama obuphantsi kunye neenwele ezinde
Ukucinywa koQeqesho oluQhawulweyo ngoBumbeko oluCwangcisiweyo
I-Mid Bald Fade kunye nePompadour kunye neendevu
Ulusu oluPhezulu oluPhukileyo luphela ngeCurly Mohawk
I-Taper ephantsi ene-Angular Crop kunye neendevu
Amacandelo amafutshane aneCandelo elisecaleni kunye neStubble
ezona ndlela zeenwele zobuso obungqukuva amadoda
iinwele ezithambileyo zaseAsia
iinwele ezimfutshane zamakhwenkwe
rose tattoo kumadoda
ukuphuma kunye nenyanga yokubala
indlela yokuluka iinwele zamadoda
I-35 Amakhwenkwe aPholileyo okucheba iinwele